Ngathi | I-Hebei Baiyun yemihla ngemihla imichiza Co., Ltd.
Imichiza yeBaiyun yemihla ngemihla
Umgangatho ophezulu, ukwahluka, amaxabiso aphantsi kunye neNzuzo ephantsi
I-Hebei Baiyun Daily Chemical Co., Ltd. eyasekwa ngonyaka ka-1997, ibekwe kwiphondo laseShijiazhuang-Hebei-esona sangqa sikhulu nesinamandla sophuhliso loququzelelo lwe-beijing-tianjin-hebei, sisakhono sokuvelisa ngobuninzi izindlu zangasese eziqhelekileyo kunye eziphezulu isepha, isepha yokuhlamba impahla, isepha engamanzi, ikhitshi kunye nezicoca izindlu zangasese abavelisi abaqeqeshiweyo, inkampani inemigca esithoba yemveliso yanamhlanje, ngaphezulu kwe-30 yabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nezobuchwephesha, iinjineli ezintathu eziphezulu, bebonke bangaphezulu kwama-200 abasebenzi kumzi-mveliso. Ngo-2012, inkampani yethu yandisa kwaye yagqiba i-workshop yokuhlamba i-liquid ngokuzenzekelayo, i-aseptic yokuhlambela i-workshop, i-workshop yangasese engenakho uthuli kunye ne-workshop yesepha. Iimveliso zithengisiwe kuwo onke amaphondo eli lizwe, ezixekweni, kwiibala kunye nakwiimarike zangaphandle.
I-Baiyun yemihla ngemihla yemichiza co., LTD ibisoloko ibambelela kwimveliso yemveliso "ejolise kubathengi, esemgangathweni wokusinda, ephezulu ekuphumeleleni, echanekileyo ngokutsha", kusetyenziswa uyilo lwemveliso esefashonini, izinto ezisetyenzisiweyo ezinempilo kunye nobuchwephesha bemveliso ephambili, ukuze iimveliso zikhuselekile kwaye zisempilweni, gcina isantya kunye neThe Times, kufutshane nemfuno yentengiso. Ngo-2009, inkampani yethu iphumelele ngempumelelo i-ISO9001: 2000 isatifikethi solawulo lomgangatho wamazwe aphesheya kunye nesiqinisekiso sokhuselo lomgangatho weQS, kwaye sibhalisiwe kwaye siphuhlise iimveliso zaso: "Jingjiu express", "ruichi", "ruibai", "baiyunjiaxu", "Reebay", "Deemax" njalo njalo. Inkampani inegalelo lonyaka leetoni ezili-10000 zesepha, iitoni ezingama-50000 zemveliso yokuhlamba imveliso engamanzi.
Umgaqo-nkqubo wokusebenza "komgangatho ophezulu, iyantlukwano, ixabiso eliphantsi kunye nenzuzo ephantsi" yenza ukuba inkampani yethu yenze inkqubo yemveliso ephezulu, ephakathi kunye nephantsi ukuhlangabezana neemfuno zamazwe ahlukeneyo, iimarike kunye namaqela abathengi. Siya kubanceda ngokwenene abantu. Ngomqondo wolawulo "wokubumba umfanekiso ngaphandle kunye nokomeleza umgangatho ngaphakathi", inkampani yethu inikwe izihloko ezihloniphekileyo "zexabiso leyunithi ethembekileyo", "icandelo lemveliso ethembekileyo", "ishishini letyala leAAA" kunye "nemveliso elungileyo esemgangathweni" iminyaka emininzi.
"Zisa iimveliso zeBaiyun kumawakawaka emizi kwihlabathi liphela" yinto yethu eqhubekayo yokuthengisa, iimveliso zethu e China ukugcina intengiso intle, kwaye ngoku sisekele ngempumelelo uthungelwano lokuthengisa kwihlabathi liphela, inethiwekhi igubungele uMzantsi Melika, IYurophu, iAfrika, iOceania, mpuma Asia kunye noMbindi Mpuma. Sineqela lemveliso yesepha yobungcali, abathengisi abaziingcali, abacebisi abaqeqeshiweyo emva kokuthengisa, abakulungeleyo ukusebenzisa iimveliso zethu zobungcali, kumakhulu ezigidi zeentsapho kwihlabathi liphela. Sijonge ukusebenza nabathengi behlabathi ukwenza ikamva eliqaqambileyo.